Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Basashii Ceyri oo dhan oo hadda dib loo Xusuusto Salmonella awgeed
Basasha ceeriin oo dhan (casaan, jaalle, iyo caddaan) ay dhoofisay Prosource Produce LLC ee Hailey, Idaho, wax soo saarka gobolka Chihuahua, Mexico, ayaa dib looga soo celinayaa suuqa sababtuna tahay faddarada Salmonella.
Macaamiishu waa inaysan isticmaalin badeecadaha dib loo soo celiyay ee hoos lagu sharraxay ama cuntooyinka ay ku jiraan basashaan ceeriin. Tafaariiqleyaasha, qeybiyeyaasha, soo -saarayaasha, iyo goobaha adeegga cuntada sida hoteellada, maqaayadaha, kafateeriyada, isbitaallada, iyo guryaha dadka lagu xanaaneeyo waa inaysan u adeegin, isticmaalin, ama iibin badeecadaha dib loo soo celiyay ee hoos lagu sharraxay.
Badeecadaha soo socda ayaa lagu iibiyey Ontario iyo Quebec waxaana laga yaabaa in lagu qaybiyey gobollada iyo dhulalka kale.
Alaabooyinkan ayaa laga yaabaa in sidoo kale lagu iibiyey jumlado ama baakado yar yar oo leh sumad ama aan lahayn sumadna laga yaabaa inaysan lahayn summad isku mid ah ama magacyada wax soo saarka sida hoos lagu sharaxay. CFIA waxay sii wadi doontaa baaritaankeeda ku aaddan kuwa kale ee wax soo dejin kara waxaana laga yaabaa in soo noqnoqosho dheeri ah ay raacdo.
brand Product size UPC Xeerarka macluumaad dheeraad ah
Big Bull Peak Fresh Waxsoosaarka Sierra Madre Waxsoosaarka Markon First Dalag Markon Aasaaska RioBlue ProSource Dooxada Rio Imperial Fresh Basasha Cas Basasha huruudda ah Basasha cad Jawaanada mesh: 50 lb 25 lb 10 lb 5 lb 3 lb 2 lb kartoonada: 50 lb 40 lb 25 lb 10 lb 5 lb doorsoome Dhammaan alaabada
dibadda laga keeno
31, 2021. Soo saarida gobolka
Haddii aad u malaynayso inaad ka xanuunsatay isticmaalka alaabta dib loo soo celiyey, wac dhakhtarkaaga.
Hubi si aad u ogaato haddii aad haysato alaabta la soo celiyay gurigaaga ama aasaaskaaga. Badeecadaha la xasuusto waa in la tuuraa ama lagu soo celiyaa meeshii lagu iibsaday. Haddii aadan hubin aqoonsiga basasha ee aad haysato, ka hubso meesha aad iibsatay.
Xusuus -qorkan waxaa kiciyay dib -u -xusuusasho dal kale. Hay'adda Kormeerka Cuntada Kanada (CFIA) waxay samaynaysaa baaritaan badbaado cunno, taasoo laga yaabo inay keento in dib loo soo celiyo alaabtii kale. Haddii alaabta kale ee halista badan leh dib loo soo celiyo, CFIA waxay ku wargelin doontaa dadweynaha iyada oo loo marayo digniinaha Xusuus-qorka Cuntada.
Ma jirin wax cudurro ah oo laga soo sheegay Kanada oo la xiriira isticmaalka badeecadan.